पाथीभरा गोल्डकपको तयारी अन्तिम चरणमा, भोली उद्घान हुने
ताप्लेजुङ: ताप्लेजुङमा भोलीदेखि सुरु हुने चौथो पाथीभरा गोल्डकपको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पूर्वमा बहुप्रतिक्षित मानिने पाथीभरा गोल्डकप प्रतियोगिताका लागि ९० प्रतिशत तयारी पुरा भएको आयोजक लाखेजात्रा खेल सञ्चालन समितिले जानकारी दिएको हो । प्रतियोगिताका लागि खेल मैदानमा प्याराफिट निर्माण लगायतका कार्य पुरा भएका छन् । प्रतियोगितालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन विभिन्न उप–समितिहरु गठन गरेर खटाईएको छ भने प्रचार–प्रसारको कार्यलाई समेत तिब्र बनाईएको छ । प्रतियोगिताको भोली १ बजे उद्घाटन गरिने आयोजकका अध्यक्ष नारायण थापाले बताए ।
सदरमुकाम फुङलिङस्थित भानुजन माविको खेल मैदानमा हुने प्रतियोगितामा यू.के. एफ.सि. दार्जेलिङ भारतको समेत गरि १० टीमको सहभागिता हुने निश्चित भएको छ । भोली हुने पहिलो खेलमा पोमु केछाङ ताप्लेजुङ र रेडहर्ष क्लब ईलामबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । उक्त खेल दिउँसो २ बजेदेखि सुरु हुने आयोजकको भनाई छ ।
यता प्रतियोगिताको पहिलो चरणका खेल हेर्नका लागि १००, सेमिफाईनल खेलका लागि १५० र फाईनल खेलका लागि २०० सय रुपैँयाको टिकट अनिवार्य गरिएको छ । करिब ९ हजार दर्शक अट्ने गरि प्याराफिट निर्माण गरिएको छ भने प्याराफिट बाहेकमा समेत दर्शक अट्न सक्ने व्यवस्था मिलाईएको छ । वर्षेनी पूर्वका हजारौँ दर्शकले अवलोकन गर्ने उक्त प्रतियोगितामा यो पटक १५ हजार बढि दर्शक हुने अनुमान समेत आयोजकको छ ।
भदौ ६ गते सम्पन्न हुने प्रतियोगितामा यू.के.एफ.सि. दार्जेलिङ, गोर्खा स्पोर्टिङ क्लब दमक, एलाभेन एरोज सुनसरी, रेडस्टार क्लब झापा, डाँगीहाट क्लब मोरङ, फिदिम स्पोर्टिङ पाँचथर, बेलबारी फुटबल क्लब, रेडहर्ष ईलाम, ताप्लेजुङ ११ आयोजक र पोमु केछाङ ताप्लेजुङ सहभागी हुनेछन् । पाथीभराको प्रचार–प्रसार गर्दै जिल्लाको पर्यटन प्रर्वद्धनमा सहयोग पु¥याउने उद्धेश्यले उक्त प्रतियोगिताको आयोजना गरिदै आएको छ ।
वि.स.२०२९ सालदेखि निरन्तर लाखेजात्राका अवसरमा प्रतियोगिता सञ्चालन हुँदै आएको छ । २०७२ सालसम्म कञ्चनजंघा च्यालेञ्ज रनिङकप भनेर खेलाईदै आएकोमा त्यस पछि भने पाथीभराको प्रचार–प्रसार गर्ने उद्धेश्य सहित पाथीभरा गोल्डकप बनाईएको हो ।